Sawirro: Duullimaadkii Ethiopian Airlines ee Muqdisho - BBC News Somali
Sawirro: Duullimaadkii Ethiopian Airlines ee Muqdisho
Lahaanshaha sawirka Omar Faruk Osman
Image caption Mudane C/laahi Maxamed Warfaa oo keeg jaraya dayaaradda gudaheeda, waxaana la jaraysa duuliyaha
Dayaaradda Ethiopian Airlines ayaa duullimaadkeedii ugu horreeyey ee rakaab ah maanta ku tagtay magaalada Muqdisho.
Dayaaradda oo nooceedu ahaa Boeign 737 waxaa saarnaa rakaab ku dhow 50, qof waxayna dullimaadkeeda Addis Ababa - Muqdisho ku samaysay in ka yar laba saacadood, ayadoo kabtanka dayaaraddana ay ahayd duuliye dumar ah.
Rakaabkii dayaaradda saarnaa waxaa ka mid ahaa qunsulka 1aad ee safaaradda Soomaaliya ee Addis Ababa, Cabdullahi Maxamed warfaa.
Wuxuu BBC u sheegay in duullimaadyadan ay muhiimad u leeyihiin ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya labadaba.
"Ganacsiyada labada dal ayuu duullimaadkan sahlayaa, waxaana mar dhow bilaaban doona duullimaadyada qaada xamuulka, waana guul u soo hoyatay ganacsatada Soomaaliyeed" ayuu yiri Warfaa.
Duulimaadkii ugu horreeyey 41 sano ee Muqdisho iyo Addis Ababa
Wuxuu kaloo ka hadlay isu socodka rakaabka ee dunida dacalladeeda.
"Soomaalida waxay u leedahay muhiimad, sababtoo ah safarradii Addis Ababa loo aadi jiray waxaa loo mari jiray dalal kale, sidoo kale dadka ku sii jeeda dalal kale ee ku sii hakanaya Addis toos ayey dunida ugu xiraysaa" ayuu ku sii daray.
Seddex xafladood ayaa lagu kala qabtay Addis Ababa ka hor intii aysan dayaaraddu ka soo duulin, in yar ka hor intii aysan soo fariisan Muqdisho ayadoom hawada ku jirta, iyo garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Image caption Adeeg lagu bixinayo dayaaradda gudaheeda
Image caption Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Itoobiya C/laahi Maxamed Warfaa
Image caption Dayaaradda oo soo fariisatay garoonka Aadan Cadde
Image caption Keegga loogu tala galay xafladdii ka dhacday Muqdisho
Image caption Cayaar dhaanto ah oo lagu soo dhaweeyey duullimaadka
Image caption Xafladda ka dhacday Muqdisho
Image caption Qunsulka oo dayaaradda gudaheeda warbaahinta kula hadlaya